Faallo: Kenya oo cirka u dirtay dayax gacmeed iyo Soomaaliya oo Wali Qabiil u sacab tumeeysa - Latest News Updates
Faallo: Kenya oo cirka u dirtay dayax gacmeed iyo Soomaaliya oo Wali Qabiil u sacab tumeeysa
Dayax gacmeed ( Satellite) ku saxiixan magaca shacabka Kenya ayaa maanta dul wareegaayo samadda, Jamacada Nayroobi (University of Nairobi) oo kaashaneeysa aqoonyahano u dhashay dalka Japan waxay shalay ku guuleesteen in satellite-kaasi si nabad ah uu ku gaaro samada kasoo loo yaqaano 1KUNS-PF. Wuxuu satellite-kaan ka caawini doonaa dalka Kenya iyo aqoonyahanadooda dhanka cilimilada iyo dhibka ka imaan kara hawada, wuxuu kaloo ka caawinayaa ka war qabka dhanka wax soo saarka iyo duur joogtada iyo wax yaalo kaloo badan.
Waxaa nasiib daro ah in shacabka Soomaaliyeed iyo dalkoodaba uu dib uga dhacay dowladaha deriska ah dhanka aqoonta, dhaqaalaha, caafimaadka, nabada iyo xiriirka caalamka tasoo sababta ugu wayn ay tahay dowlad la’aanta. Waxaa kaloo ayaan daro ku ah umadda Soomaaliyeed inay lumiyeen laba jiil oo dhalinyaro ah, waxaa hubaal ah in laga soo kabto dhibkaan ay u baahan tahay aqoon iyo dowladnimo loo dhan yahay.
Waxaan kula talinayaa walaalaha Soomaaliyeed inay dhinac iska dhigaan waxkasta oo kala qaybin kara, una midoobaan inay iska qabtaan shaqsiyaadka fara ku tiriska ah ee hor taagan midnimada iyo dowladnimadooda oo doonaayo inay ukala qaybiyaan xaafado ay ayaga ay leeyihiin, waxaa hubaal ah hadaad u sacab tuntaan qabiil iyo shaqsi sheeganaayo siyaasi inaad ku sugnaan doontaan mustaqbal mugdi ah idinka iyo caruurtiinaba.
Qabiilka waxaad ka heshaan aan aragno.